ONE sy firaisamonim-pirenena: tsy misy fampandrosoana raha tsy ny tontolo iainana | NewsMada
ONE sy firaisamonim-pirenena: tsy misy fampandrosoana raha tsy ny tontolo iainana
Tsy tanteraka ny fampandrosoana maharitra lovain-jafy raha tsy miainga amin’ny tontolo iainana. Izay ny fanamarihana nataon’ny Foibem-pirenena momba ny tontolo iainana (ONE) sy ny vondron’ny firaisamonim-pirenena, miara-miasa manomboka izao.
Tsy misy fampandrosoana maharitra raha tsy miainga avy amin’ny fiarovana ny tontolo iainana, raha fintinina ny fehin-kevitra fiaraha-miasan’ny ONE sy ny vondron’ny firaisamonim-pirenena. Samy nanamafy izany ny filohan’ny ONE, i Ampilahy Laurent, sy ny filohan’ny AVG, Razakamanarina Ndranto. Tsy tombontsoan’ireo fikambanana ireo no kendrena fa ho an’ny firenena. Ny hevitra iraisana mampisy ny fampandrosoana, ka afaka misitraka izany ny mponina, tsy ao amin’ny faritra arovana ihany fa ny vahoaka manontolo, rehefa misy ny fifampiresahana sy ny fifanakalozan-kevitra, araka ny fanamarihan’ny roa tonta.
Ny sehatra sy ny mponina rehetra voakasika mivantana amin’izao tetikasa izao. Raha amin’ny tanàn-dehibe, ohatra, tsy maintsy tandrovina ny fifamoivoizana hikajiana ny rivotra madio. Tsy izany aloha ny zava-misy eto an-dRenivohitra hatramin’izao raha ny fahitana fahamaroan’ny fiara mamoaka etona maloto, misy fiantraikany amin’ny fahasalamana sy ny asa fihariana. Nomarihin’ny vondron’ny firaisamonim-pirenena fa « izao fiaraha-miasa izao, tsy misakana ny tsikera atao amin’ny ONE. Hanatsarana ny fomba fiasany, izany hoe, misy fanaraha-maso ka hirosoana ny fitoriana raha hita ny tsy fanarahan-dalàna », hoy Razakamanarina Ndranto.
Tsy ny fanjakana sy ny tsy miankina ihany
Nambara avy amin’izao fifanarahana izao ihany koa fa tsy tokony ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ihany no manapa-kevitra amin’ny tetikasa soritana na fampiasam-bola atao mahakasika ny tontolo iainana. « Tsy ampy ny fehin-kevitra voangona momba ny tontolo iainana, ny toekarena sy ny sosialy raha izay ihany. Ilaina ny fifanarahana sy ny fifanomezan-tanana”, hoy hatrany Razakamanarina Ndranto. Andrasana ny fampiharana izany manoloana izao fiovan’ny toetr’andro izao, miteraka fahavoazana maro isan-karazany. Ho hita eo ny fanatanterahana ny toekarena manga ao anatin’ny tetibolam-panjakana 2019.